Ama-Dominoes 🥇 Faka futhi ujabulele kusuka ku-emulator.online
Dominoes. Umdlalo wama-dominoes kakhulu idume umhlaba wonke futhi idlalwe yizinkulungwane zabantu. Emibuthanweni yomndeni, imibuthano yabangane, amaphathi, ukosa inyama, ngezimpelasonto, njll.
Kungenzeka ukuthi ungomunye wemidlalo endala kunayo yonke lapho kukhona izinkomba.
Ama-Dominoes: ungadlala kanjani igxathu negxathu😀
UDomino ngumdlalo webhodi osebenzisa izingcezu zobunjwa obunxande, ngokuvamile inikezwe ubukhulu obubanika ukwakheka kwe-parallelepiped, lapho obunye bobuso buphawulwa khona ngamachashazi abonisa amanani ezinombolo.
Leli gama lisetshenziselwa ukuqoka ngakunye izingcezu ezakha lo mdlalo. Igama kungenzeka lisuselwa enkulumweni yesiLatini "i-domino yamahhala" ("Ngiyabonga INkosi"), kusho abapristi baseYurophu ukumaka ukunqoba emdlalweni.
Inani labadlali: 4
Izingcezu: Izingcezu ezingama-28 ezinamacala kusuka ku-0 kuye ku-6.
Izingcezu zomhlanganyeli ngamunye: Izingcezu eziyi-7 zomhlanganyeli ngamunye.
Injongo yomdlalo: yenza amaphuzu angama-50.
Isiqeshana se-Domino: ucezu olwenziwe ngemikhawulo emibili, ngasinye sinenombolo (izibonelo zezingcezu: 2-5, 6-6, 0-1).
Ungazibeka kanjani izingcezu?: lapho ucezu lubekwa eceleni kolunye okungenani olunenombolo eyodwa ngokufana (isibonelo: 2-5 ifana no-5-6).
Kudlula ithuba: lapho umdlali engenaso isiqeshana esilingana nokuphela kwaso.
Umdlalo uvinjiwe: lapho kungekho mdlali onengcezu elingana ukuphela ngakunye.
Ngubani onqobayo umdlalo?: lapho omunye wabadlali ekwazile ukuphelelwa yizicucu esandleni sakhe, ebalungiselele bonke.
Idlalwa kanjani i-Dominoes?🁰
Izingcezu "zixutshwe" etafuleni, futhi umdlali ngamunye uyathatha Izingcezu eziyi-7 ezizodlalwa. Umdlali oqala umdlalo nguyena inesiqeshana 6-6🂓. Qala umdlalo ngokubeka le ngcezu enkabeni yetafula. Ukusuka lapho, dlala ngokulingana newashi.
Umdlali ngamunye kumele azame ukufaka ezinye izingcezu zakhe ezingcezwini ekupheleni komdlalo, ngakunye ngasikhathi. Lapho umdlali ekwazi ukulingana ucezu, ithuba lidluliselwa kumdlali olandelayo. Uma umdlali engenaso isiqeshana esilingana nhlangothi zombili, kumele ngidlulise ithuba, ngaphandle kokudlala izingcezu.
El umdlalo ungaphela ezimweni ezimbili: lapho umdlali ekwazi ukushaya umdlalo, noma lapho umdlalo ukhiyiwe. Umdlali wokuqala ngalesi sikhathi uzoba ngumdlali ngakwesokudla somdlali wokuqala kusuka kumdlalo owedlule.
Uma kukhona umdlali onqobile umdlalo: ithimba lakho lithatha wonke amaphuzu eziqeshini ezisezandleni zabaphikisi.
Uma umdlalo uvaliwe: wonke amaphuzu atholwe ngababili ngamunye abaliwe.
Umbhangqwana onamaphuzu ambalwa kunawo wonke ungumnqobi, futhi uthatha wonke amaphuzu wababili abaphikisayo. Uma kukhona uthayi kulokhu kubalwa kwamaphoyinti, umbhangqwana ovimbe umdlalo uyahlulwa futhi umbhangqwana owinile uthatha wonke amaphuzu akulezi zithandani. Amaphuzu wababili abawinile anqwabelene futhi umdlalo uphela lapho elinye lamapheya lifinyelela kumaphoyinti angama-50.
Inani lephuzu locezu ngalunye lihambisana nesamba samanani wemiphetho emibili yocezu. Ngakho-ke, ucezu 0-0 lufanele amaphuzu ayi-0, ucezu 3-4 lufanele amaphuzu ayi-7, ucezu 6-6 lunamaphuzu ayi-12, njalonjalo.
Umdlalo unabahlanganyeli abane, abakha ngababili, futhi kumele bahlale kwezinye izikhundla.
umbono owamukelwa kakhulu ukuthi ngabe wavela eChina phakathi kuka-243 kuya ku-181 BC , edalwe yisosha eligama linguHung Ming.
Ngaleso sikhathi, izingcezu zazifana kakhulu nokudlala amakhadi, okunye okwasungulwa ezweni, futhi kwabizwa nokubizwa "izincwadi ezinamachashazi" .
Entshonalanga, alikho irekhodi lama-dominoes kuze kube maphakathi nekhulu le-XNUMX, ngenkathi ivela ku I-France ne-Italy, ngokunembile ezinkantolo ze IVenice neNaples, lapho umdlalo wawusetshenziswa khona njengokuzilibazisa.
Isitobhu esilandelayo kubonakala sengathi yiNgilandi, esethulwe ngu Iziboshwa zaseFrance ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX.
Kusukela lapho kuya phambili, kuya ngemicabango yethu nolwazi oluyisisekelo lomlando, kepha singabonga kuphela abokufika, ukwamukela noma cha, abalethe umdlalo emazweni aseSpain.
Into yomdlalo nomhlobiso
Ibhulokhi elincane, eliyisicaba nelilunxande, i- Ama-Dominoes angenziwa ngezinto ezahlukahlukene, ezinjengokhuni, ithambo, itshe noma ipulasitiki.
Izinhlobo ezinethezeka ngokwengeziwe, ezithunyelwe ngabathandi bomdlalo nabaqoqi, zenziwe ngemabula, ngegwadle nangetshe lensipho.
Lezi zinhlobo ezicwengisisiwe zivame ukufakwa emabhokisini enziwe ngezifiso, imvamisa enziwe nge-velvet, futhi akhonjiswa njengezinto zokuhlobisa eziyiqiniso.
Njengokudlala amakhadi, okuhlukile, ama-domino anezimpawu zokuhlonza kolunye uhlangothi futhi awanalutho kolunye.
Ubuso obunobunikazi bocezu ngalunye buhlukaniswe, ngomugqa noma ngaphezulu, kube yizikwele ezimbili, ngasinye sazo simakwe ngochungechunge lwamachashazi, njengalawo asetshenziswe kudatha, ngaphandle kwezikwele ezimbalwa ezisele. okumhlophe.
Enguqulweni yaseYurophu yomdlalo, kunezicucu eziyisikhombisa ngaphezulu kunaseChina, sezizonke zingama-28.
Ngenkathi itshe elinenombolo ephezulu kakhulu kuma-dominoes ethu ajwayelekile lingu-6-6🂓, kwesinye isikhathi kusetjenziswa amasethi amakhulu afika ku-9-9 (izingcezu ezingama-58) kuze kufike ku-12-12 (izingcezu ezingama-91).
I-Inuit yaseNyakatho Melika idlala inguqulo yama-dominoes kusetshenziswa amasethi aqukethe izingcezu eziyi-148.
E-China, lapho ubuhlakani bomdlalo kubonakala sengathi abunasiphetho, i- Ama-Dominoes futhi asebenze njengesisekelo nemodeli yomdlalo ofanayo kodwa onzima kakhulu: mahjong .
Yiziphi izinzuzo nobubi bama-dominoes?
Noma yimuphi umdlalo unezinzuzo nezinkinga zawo, ngisho nendala njengama-dominoes. Izinzuzo zayo zizungeze ukunotha komdlalo kanye nobubi bokuphazamiseka kwawo okuthile.
Ukuqala ngezinzuzo, enye yazo ukuthi ngumdlalo wabo bonke ubudala, ngoba kulula ukuwuqonda, ukuhlangana nokuphatha kalula, kepha ngenani elikhulu lamasu wokujabulisa labo abadlala isikhathi eside.
Ngaphakathi kwaleli qembu lobudala elikhulu kunezinzuzo eziningi zokuqonda, njengokukhuthaza kokukhula okunengqondo-kwezibalo komncane kunabo bonke, umqondo ophusile wabantu abadala, nenkumbulo yabantu abadala.
Ekugcineni, ngumdlalo osebenzayo. Ngobuso obuqondile futhi okungenani abadlali ababili, kuzokwanela ukuqala umdlalo.
Kepha nomdlalo onezinzuzo eziningi unezinto ezithile ezincane ezicasulayo. Ukuqala ngeqiniso lokuthi kunabadlali abane kuphela, okungenani emidlalweni eminingi. Kunzima ukujabulisa iqembu elikhulu, ngokwesibonelo.
Okunye ukubuyela emuva yi- "i-finesse" ukusetha umdlalo, njengemidlalo eminingi yebhodi noma nemidlalo yebhodi. Izingcezu zihlangene ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwe-fixation. Ukuphahlazeka okungazelelwe ngaphezulu etafuleni futhi yilokho kuphela.
IzingcezuEqinisweni, zingamaphutha kuzo ngokwazo, okungenani lapho zilahlekile, ngoba zincane, noma ziyaguga, zilahlekelwe ukubonakala kwazo noma inani lazo, ngomqondo wamachashazi.
Umhlangano olula nokuphathwa
Izingxenye ezilahlekile kanye / noma ezigugile
Imikhonyovu ethandwa kakhulu ku-inthanethi